Paraiba tourmaline - Copper - neon greenish colored blue - video
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agba agba tourmaline dị na Brazil. Karịsịa na mba Brazil nke Minas Gerais na Bahia. Na 1989, ndị na-egwuputa ihe na-achọpụta ụdị njem tourmaline dị iche iche dị iche iche na-egbuke egbuke na steeti Paraiba. Ụdị nkume ahụ dị ọhụrụ, nke a na-akpọzi paraiba tourmaline, bịara na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Brazil paraiba tourmaline na-agụnyekarị ihe ndị dị ukwuu. Ọtụtụ n'ime paraiba tourmaline si Brazil. O sitere na obodo Rio Grande do Norte. Ihe ndị dị na Rio Grande do Norte na-adịkarị ntakịrị ike na agba. Ma a na-achọta ọtụtụ ọmarịcha ihe ọma n'ebe ahụ. Ihe ọla kọpa nke ọla kọpa dị mkpa na agba nke nkume ahụ.
Na njedebe 1990s, e nwere ọla kọpa nke nwere tourmaline na Nigeria. Ihe a na-emekarị bụ ihe na-adịghị mma karịa ihe ndị Brazil. Ọ bụ ezie na ihe a na-emekarị abụghị obere ihe. Achọpụta Africa nke na-adịbeghị anya site na Mozambique. Ọ na-ejikwa ọla kọpa meepụta nje ndị na-agbagharị na tourmaline, yiri paraiba Brazil. Ọ bụ ezie na agba ya adịghị egbuke egbuke karịa ihe dị elu Brazil. Paradaba Mozambique na-egosipụtakarị ihe ndị ọzọ. Anyị chọtara ya na oke nha. Mozambique paraiba tourmalines na-enwekarị àgwà mara mma karịa ndị Nigeria. E nwere nnukwu ihe na agba na nghọta doro anya na paradaba Mozambique na paradaba Brazil. Karịsịa site na Rio Grande do Norte. Ọ bụ ezie na ọ dị oke ọnụ ala karịa paraịba Brazil kacha elu. Ụfọdụ ihe Mozambique na-ere ihe karịrị US $ 5,000 kwa carat. Ọ bụ tourmaline dị oke ọnụ. Karịa karịa agba ndị ọzọ.
Paraiba bụ steeti Brazil. Ọ dị na North Brazil. Na bprdert nke Rio Grande do Norte n'ebe ugwu. Ceará n'ebe ọdịda anyanwụ. Pernambuco n'ebe ndịda. Na Atlantic Ocean na n'ebe ọwụwa anyanwụ.
Paraiba bụ obodo nke atọ nke ebe ugwu ọwụwa anyanwụ. João Pessoa n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ isi obodo. Ọ bụ ezie na Campina Grande, n'ime ime ụlọ, dị n'etiti obodo iri na ise kasị ukwuu na Northeast Brazil.
Ntugharị neon blue beryl
Tags Beryl, Paraiba, sịntetik